#Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo war ka soo saartay Go’aankii Kenya (Akhriso) - Get Latest News From Horn of Africa
#Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo war ka soo saartay Go’aankii Kenya (Akhriso)
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa jawaab rasmi ah ka bixisay labo tallaabo oo Bishan May gudaheeda ay ku dhaqaaqday Dowladda Kenya kuwaas oo labada ka dhan ahaa Soomaaliya.
Tallaabada 1aad ayaa ahayd markii 9kii Bishan May ay Kenya ku dhawaaqday in ay joojisay duullimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi,waxaana ay amar ku bixisay in diyaaradaha ka dhoofaya Aadan Cadde ay maraan Magaalada Wajeer si halkaas loogu baaro.
20kii Bishan ayey dowladda Kenya saddex mas’uul oo ka socday Soomaaliya u diidday in Garoonka Joma Kenyatta fiisaha uga dhufsadaan baasaboorradooda diblomaasiga ah si ay u galaan Kenya halkaas oo ay shir uga qeybgelil lahaayeen,hayeeshee waa loo diiday waxaana qasab ku noqotay in ay dib ugu soo laabtaan Muqdisho.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaali ayaa maanta soo saartay jawaab la xiriirta arrintan,warqad ka soo baxday Wasaaradda arrimaha dibaddda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka walaacsantahay go’aanka ay dowladda Kenya mas’uuliyiinta Soomaalida ugu diidday fiisaha.
Waxa kale oo warqadda lagu sheegay in hab dhaqanka Kenya uu liddi ku yahay hanaanka caalamiga ah ee diblomaasiyadda, xiriirka soo jireenka ah ee labada dal,waxaa kale oo ay dowladda Soomaaliya sheegtay in ay sidoo kale ka walaacsan tahay go’aanka diyaaradaha Muqdisho iyo Nairobi loogu wareejiyay wajeer si halkaas loogu baaro.
Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa dhiggeeda Kenya ka dalbatay in ay dib u eegis ku sameyso tallaabooyinka iyo go’aannada ka soo baxay,kuwaas oo ay Soomaaliya sheegtay in ay wax u dhimi karaan Xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal.
Ugu dambeyn Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhinaceeda ay ku dheggan tahay dhaqan gelinta heshiisyadii hore ee dhexmaray Soomaaliya iyo Kenya.
Wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma oo shalay ka hadlaysay go’aanka Mas’uuliyiinta Soomaalida loogu diiday Fiisooyinka ayaa sheegtay in Diblomaasiyiinta oo dhan ay safraan kuna safraan Baasaboor fiisa leh, ee aan dal kale lagu galin baasaboor diblomaasi ah oo aan fiiso lahayn.